Kandidà ho filoham-pirenena : Samy hanova lalàm-panorenana -
AccueilRaharaham-pirenenaKandidà ho filoham-pirenena : Samy hanova lalàm-panorenana
Kandidà ho filoham-pirenena : Samy hanova lalàm-panorenana
18/10/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Notanterahina omaly tetsy amin’ ny Carlton Anosy ny adihevitra, nandraisan’ireo kandidà miisa 17 anjara. Nandritra ny adihevitra, dia samy nitondra ny programan’asany avokoa ny tsirairay. Niraisan’ny ankamaroan’ ireo kandidà nandritra ny famelabelarana nataon’izy ireo, ny hanafoanana ny antenimieran-doholona sy ny fanovana lalàm-panorenana. Mikasika ny Antenimieran-doholona, dia samy nilaza ireo kandidà fa fandaniana be fahatany ny fisian’io andrim-panjakana io. Ny antenimieram-pirenena dia afaka mandany lalàna. Mikasika kosa indray ny lalàm-panorenana, dia nambaran’izy ireo fa mahatonga disadisa ny lalàm-panorenana ankehitriny. Porofo mivaingana ny zava-misy nandritra ny fitondrana nisy teo aloha, noho io lalàm-panorenana amin’izao fotoana io. Tsapa ihany koa nandritra ny adihevitra ny fametrahan’ireo kandidà, ho vaindohan-draharaha ny sosialim-bahoaka sy ny lafiny ara-toekarena.
Safidim-bahoaka : TSY IJERENA TAVAN’OLONA !
Gazety mpanohana ny fitondrana ny Triatra ary tena manohana izao fitondrana izao tanteraka mihitsy no sady tsy miafina amin’izany rahateo koa. Tsy amin’ny maha Hery Rajaonarimampianina akory no hanohanan’ny gazety azy fa ny politikam-pampandrosoana napetraky ...Tohiny
Marc Ravalomanana : 10 Tapitrisa Ar ho an’ny Barea